Nabadgelyada kombiyuutarka - 10 talooyin oo ku saabsan amnigaaga PC -gaaga
Soo -saaraha furaha
Maqaarka rog -rog
Startseite/tilmaamaha/Nabadgelyada kombiyuutarka - 10 talooyin oo ku saabsan amnigaaga PC -gaaga
10 talo oo ku saabsan amniga kombiyuutarka
10 xeerka dahabka ah ee amniga kombiyuutarka
2. Si joogto ah dib ugu celi dariiqa adag
3. Ku rakib Amniga Internetka
4. Ku rakib cusboonaysiinta si joogto ah
5. Si joogto ah u beddel furaha sirta ah
6. Wax sir ah ha ku kaydin biraawsarka
7. Qarsoon WLAN
8. Ka taxaddar aaladaha USB-ga dhinac saddexaad
9. Wax walba ha soo dejin
10. Ha furin email kasta
Markaad ka shaqaynayso kombiyuutarkaaga, waqti ka dib waxaad ogaan doontaa in ammaanka kombiyuutarku yahay wax walba oo dhammaad leh. Qofku isma ilaalin karo si ku filan iyo boqolkiiba boqol ka hortagga Trojans, fayrasyada ama khataraha kale. Waxaa muhiim ah in la raaco xeerar dhowr ah si aadan u la yaabin wax xun. Halkaan waxaa ah dhowr talooyin si aad naftaada uga badbaadiso khataraha ugu badan.
F-Secure SAFE Internet Security 2015 1 sano / 1 qalab
Ka ilaali dhammaan qalabkaaga hal adeeg
Sii PC -gaaga, Mac, taleefankaaga casriga ah iyo kiniiniga leh ilaalinta ugu fiican adduunka
1 10 xeerka dahabka ah ee amniga kombiyuutarka
2 1. Abuur furaha Windows
3 2. Si joogto ah dib ugu celi dariiqa adag
4 3. Ku rakib Amniga Internetka
5 4. Ku rakib cusboonaysiinta si joogto ah
6 5. Si joogto ah u beddel furaha sirta ah
7 6. Wax sir ah ha ku kaydin biraawsarka
8 7. Qarsoon WLAN
9 8. Ka taxaddar aaladaha USB-ga dhinac saddexaad
10 9. Wax walba ha soo dejin
11 10. Ha furin email kasta
12 Soo koobid Amniga Kumbuyuutarka
1. Abuur furaha Windows
Haddii aad kombuyuutarkaaga la wadaagto dhowr qof, waa inaad hubisaa inaad furaha sirta ah ku shubto koontadaada isticmaalaha Windows. Tani waxay ka horjoogsanaysaa qof walba inuu helo xogtaada markii aad hadda ka tagtay PC -gaaga.
Waxaan ka shaqeynayay kumbuyuutarrada sannado, waxa ugu muhiimsan ee aan bartay ayaa ah inaan ku kaydiyo waddooyinkayga adag xogtayda ugu muhiimsan (oo ay ku jiraan nidaamka hawlgalka). Waxaan la kulmay khibrad xumo ah inaan lumiyo GB badan oo xog ah ka dib waditaan adag oo ciladaysan. Tan iyo markaas, nabadgelyada kombiyuutarku aad bay muhiim u ahayd waxaanan raadinayey siyaabo aan iskaga difaaco. Xaqiiqdii ma jirto wax la yiraahdo 100% ilaalin, laakiin si fiican baan u seexan karaa.
Dib ugu soo celi dariiqaaga adag si joogto ah. Xogtaada laguma lumin doono gurmad.
Mid ka mid ah xeerarka ugu muhiimsan marka la keydinayo xogta gaarka ah sida sawirrada, fiidyowyada ama dukumiintiyada marna ma ahan in la keydiyo xogta meesha nidaamka qalliinka lagu rakibay, badiyaa disk adag C. Beddelkeeda, u qeybi diskka adag laba ama in ka badan oo mar walba keydi xogta shaqsiyeed ee ku jirta darawalnimada adag D oder E.
Haddii aadan sameynin kaydinta darawalnimada adag ee C (nidaamka wadista), aad bay u daal badan tahay oo waqti ayay qaadataa inaad dib u rakibto wax walba. Waxaad ku bilaabaysaa Windows, rakib wadayaasha oo dhan ka dibna barnaamijyada aad la shaqayso. Waxaa jira barnaamijyo lagu ilaalinayo oo, haddii ay dhacdo in loo baahdo gurmad, dib -u -dhisku wuxuu qaataa dhowr daqiiqo.
Shakhsi ahaan, ka dib markii aan soo maray waayo -aragnimada xun, waxaan lumiyay xogtayda kadib shil baabuur oo adag, waxaan ku shaqeeyaa kombiyuutarkeyga / laptop -kayga barnaamijyada gurmadka sida:
Kaabashada EaseUS Todo
Barnaamijku wuxuu abuuraa keydin ka yimaada diskka adag C ilaa serverkeyga maalin kasta kadib markaan shido kombiyuutarka. Kaydinta waxaa lagu sameeyaa asalka iyo haddii ay dhacdo dhibaato Waxaan soo celin karaa nidaamkeyga anigoo adeegsanaya USB degdeg ah.
Intee jeer ayaad dib u soo celisaa?: Taasi waxay ku xiran tahay hadba sida xogtaadu adiga muhiim kuugu tahay iyo sida ay hadda tahay.
Halkee la keydin doonaa kaydintayda? Waxa ugu fiican waxay noqon doontaa kaydinta dariiqa adag ee dibedda ama server. Waxaan jeclaan lahaa inaan halkaan ku xuso in barnaamijyada qaar sida. Acronis waxay ku kaydin kartaa dariiqa adag daruuraha.
Ku soo celi maxaa? Habka ugu fudud ayaa leh Acronis True Image, Kaabashada EaseUS Todo, Ashampoo Backup Pro ama wax la mid ah.
Software -ka amniga waa lama huraan. Sidaa darteed, ku rakib qol nabadgelyo si aadan u ilaalin naftaada oo keliya markaad internetka dhex mushaaxayso furin, Trojans iyo fayrasyada, laakiin emaylkaaga iyo Ulaha USB waa la sawiraa.
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo softiweer ah. Su’aashu waxay tahay software -ka bilaashka ah sida Avira ama Avast ma ku filan yahay? Laakiin maskaxda ku hay in xayeysiiska loo daaray barnaamijyada freeware -ka ah.
Dad badan ayaa la yaaban, ka waran Difaacaha ku jira daaqadaha? Ma ku filan tahay? Waayo -aragnimadayda, badbaadintu halkan way ka hooseysaa.
Aad bay muhiim u tahay markaad ka shaqaynayso kombiyuutarrada si aad Windows ula socodsiiso. Sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad dhaqaajiso cusboonaysiinta otomaatiga ah. Tani waxay kordhisaa amniga kombiyuutarka.
Ma aha oo kaliya muhiim in la cusboonaysiiyo Windows-ka, laakiin sidoo kale barnaamijyada rakiban. Barnaamijyada intooda badani waxay haystaan ​​ikhtiyaar ay si joogto ah u hubiyaan wixii cusub. Dhaqaajiso dejinta oo mar walba waa lagu soo wargelin doonaa marka nooc hadda jira la heli karo.
Barnaamijyada Internetka sida Flash, Java iyo Acrobat browser plug-ins, waxaa si gaar ah muhiim u ah in lala socodsiiyo. Hackers badan ayaa adeegsada dayacanka sida B. Flash ama Java si loo faafiyo furin, Trojans iyo fayrasyada.
Fiiro gaar ah: Haddii kombiyuutarkaagu uu cudurka qabo, halkan waxaa ku yaal dhowr talooyin oo ka sii muhiimsan oo Muhiim ah:
Ku bilaw kombiyuutar cudurka qaba adiga oo isticmaalaya HitmanPro.Kickstart ul USB
Tilmaamaha AdwCleaner si looga saaro Adware Malware
Xeerka ugu muhiimsan in Passwort waa: Ha ku isticmaalin isla erayga sirta meel kasta. Waa dabcan mid aad u fudud oo ku habboon in mar walba la isticmaalo isla erayga sirta ah.
Haddii eraygaaga sirta ah la dildillaacay ama la xaday, tuugadu meel kasta ayay ka geli karaan xisaabaadkaaga.
Fadlan ogow qodobbada si aad u samaysato eray sir ah oo sugan.
Dhererka sirta : ugu yaraan 8 iyo doorbidayaa xuruuf badan
Isku -darka tirooyinka iyo jilayaasha gaarka ah iyo xarfaha waaweyn iyo kuwa hoose
Ka fogow macluumaadka shaqsiyeedka sida magaca, dhalashada naftaada ama xubnaha qoyskaaga ama dadka caanka ah ama xayawaanka rabaayadda ah
Iska ilaali inaad sirtaada ku keydiso qoraalada ama xitaa taleefankaaga gacanta
Waligaa ha ka tanaasulin kuwaaga Furaha dhinacyada saddexaad
U isticmaal koronto -dhaliyeheena furayaasha sirta ah ee sugan
Dabcan, habkani waa mid aad u habboon. Furaha sirta ah ee uu keydiyey biraawsarka ayaa si otomaatig ah loo geliyaa marka xigta ee aad booqato mareegaha. Sida caadiga ah, furayaasha sirta ah ee la keydiyay ma aha kuwo sir ah waxaana akhrin kara furin.
Waxaan ku bilaabi doonaa router -kaaga. Router -ku waa aaladda dhexe ee shabakadda gurigaaga. Xaqiiji gelitaanka router -kaaga sida ugu macquulsan. Adeegso furaha sirta ah. Haddii hacker uu la wareego router -gaaga, waxay xakameyn karaan aaladaha ku xiran shabakaddaada adiga oo aan ogeyn. Xeerka Golde ayaa halkan khuseeya: Had iyo jeer ku rakib qalabkii ugu dambeeyay.
Hadda waxaan u nimid su'aasha ah: sideen u ilaaliyaa WiFi -keyga? Halkan, sidoo kale, waa inaad hubisaa inaad adeegsato eray sir ah oo dheer oo sugan oo leh ugu yaraan 20 xaraf oo ka kooban tirooyin, xarfo waaweyn iyo xuruuf gaar ah.
Had iyo jeer u isticmaal WPA2 (CCMP) si sir ah oo u fur sida dekado yar router -kaaga.
Shisheeye kasta USB stick iyo USB drive waa la sumayn karaa. Isku xidhka, fayrasyada iyo Trojans -ka ayaa lagu wareejin karaa kombuyuutarkaaga. Sidaa darteed waa inaad ka taxaddartaa waxa aad isku xirayso. Adeegso barnaamij gurmad ah sida kor lagu sharaxay. Markaad isticmaaleyso barnaamijyadan, aaladaha ku xiran si otomaatig ah ayaa loo hubiyaa. Talo: Isticmaal ulaha USB -gaaga
Internetka waxaa ka buuxa faylal cudurka qaba. Had iyo jeer u fiirso waxa iyo meesha aad wax ka soo dejisanayso. Adeegso marinnada soo dejinta sida pcwelt.de. ama Compuertbild.de iyo dabcan shabakadaha soo -saaraha. Software -ka halkaas ku yaal ayaa laga hubiyaa khayaanada. Adeegso barnaamijka amniga internetka halkan sidoo kale. Faylasha la soo dejiyay waxaa lagu hubiyaa khayaanada marka la soo dejiyo.
Iimayl kasta oo aad heshaa dhib ma leh. Fayrasyada Trojans ama furin kale ayaa lagu faafiyaa emaylka.
Lifaaqyada faylka - Si gaar ah uga digtoonow haddii aad hesho iimayl ku lifaaqan faylka kuwa soo diray aan la garanayn. Viruses, Trojans, malware ama barnaamijyo kale oo waxyeello leh ayaa laga heli karaa lifaaqyada.
spam - Inta badan spam-ku waa e-mail aan dhib lahayn oo ay ku jiraan xayeysiisyo aan loo baahnayn. Laakiin iskuxirka ku jira oo aad hore u sii gudbiso, mareegahaani waxay noqon karaan kuwo wasakhaysan. Farriimahaan spam waxay noqon karaan kuwo aad looga xumaado. Inta badan e-maylka waxaa aqoonsada bixiyaha Spam waxaana lagu riixaa galka Spam. Si kastaba ha noqotee, spam qaar ayaa ka gudbi kara.
phishing - Waa inaad si taxaddar leh uga taxaddartaa phishing. Dembiilayaashu waxay isticmaalaan khiyaanadan si ay isugu dayaan inay xogtaada ka xadaan mareegaha been abuurka ah. Emailada noocan oo kale ah ayaa si fiican loo qabtay waxayna u muuqdaan kuwo aad u xirfad badan. Tusaale ahaan, waxaad badanaa heshaa emayl phishing markii lagu weydiiyo inaad beddesho eraygaaga sirta ah ee degel gaar ah. Xiriirka ku dhex jira wuxuu kuu horseedaa degel isku mid ah halkaas oo lagu weydiin doono inaad geliso eraygaaga sirta ah oo badiyaa E-Mal. Sidii aan idhi, si gaar ah halkan uga taxaddar.
Soo koobid Amniga Kumbuyuutarka
Ka dhig software -ka iyo nidaamka hawlgalka mid cusub
Adeegso oo cusboonaysii scanner -ka fayraskii ugu dambeeyay ama amniga internetka
Adeegso furayaasha sirta ah, baddel furayaasha sirta ah
Ka digtoonow lifaaqyada iimaylka ee aan la garanayn-ha furin lifaaq kasta oo iimayl ah
Dib ugu celi xogtaada (nidaamka hawlgalka) si joogto ah
Qoraalkani wuxuu ka weyn yahay hal sano sidaa darteedna waxaa laga yaabaa inuu waqtigiisii ​​dhammaaday
Sidoo kale xiiso leh:
Ka hortag otomatiga bogagga Firefox -ka
Ku fur bogag -hoosaad tab cusub oo leh Firefox
Muuji nooca Windows desktop -ka
Ma rabtaa inaad xirto dhammaan tabs? Dami ogeysiiska Edge
Disable Cusboonaysiinta Adobe Reader
Tirtirka koontada Instagram - waa kan sida
Muuqaalka: Samee xusuusinta iimaylka
Isku dhaji FritzBox NAS USB ul sida shabakad wadid - tani waa sida ay u shaqeyso
Kombiyuutarkaagu ma leeyahay deked USB 2.0?
Dib -u -dejinta Chrome waxay tirtirtaa dhammaan dejintii
Xiriirrada Amazon ayaa ku jira boggan. Sida shuraakada Amazon, waxaan ka kasbannaa iibin aqoon leh haddii aad gujiso xiriiriyaha Amazon ee u dhigma.
Facebook Twitter Pocket WhatsApp telegraam Viber La wadaag email Riix
Anigu waxaan ahay Vangelis, milkiilaha iyo maamulaha windowspower.de. Waxaan ahay taageere Windows ah oo xamaasad leh waxaana wada dhisay kooxdayda dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxaan si joogto ah uga shaqeyneynaa soo jeedinta xalka dhammaan dhibaatooyinka suurtagalka ah ee Windows. Aad ayaan ugu faraxsanahay haddii talooyinkayaga iyo tabahayaga ku saabsan windowspower.de ay ku caawiyaan.
Samee usha USB -ka ee la kicin karo Windows 11
1 usbuuc ka hor
Barkinta Ku gal koonto Google
2 toddobaad kahor
Muuji lambarka taxanaha ah, soo -saaraha, moodalka, qalabka diskka adag ee hoostooda Windows
3 toddobaad kahor
Suumanka khadadka ku jira daabacaha ayaa daalay. Fadlan la xiriir taageerada Epson
Windows 10 Talooyin Hagaajinta Xeeladaha Sida Loo-Fiidiyowga. Ma waxaad raadineysaa Windows 10 talooyin iyo tabaha? Annaga waxaad naga heli doontaa tilmaamo waxtar leh, casharrada fiidiyaha iyo macluumaad waxtar leh si kor loogu qaado Windows -kaaga.
Sida shuraakada Amazon, waxaan ka kasbannaa iibin aqoon leh haddii aad gujiso xiriiriyaha Amazon ee u dhigma.
Maqaalka ugu sarreeya
Samee Windows 10 si ka dhakhso badan - dardar kombiyuutarkaaga
U samee OneDrive sidii shabakad wadid
10 talooyin oo ku saabsan amniga kombiyuutarka
Keydinta Dhaqdhaqaaqa Windows
Furaha Windows ka akhri wadid adag oo dibadda ah
Abuur wadid soo kabasho
Samee usha USB -ka la kicin karo oo leh aaladahaaga
Samee daabacaha caadiga ah gudaha Windows 10
Ku dhaqaaji kamaradda webka gudaha Windows 10
Dejinta bilowga gudaha Windows 10 - dhammaan suurtagalnimada
5 -ta ugu fiican 1TB SSD -yada adag marka la barbar dhigo
5 -ta USB ee ugu fiican waxay ku dhejisaa 256 GB marka la barbardhigo - tijaabada usha USB
Xusuusta ugu fiican 5 (RAM) 16 GB marka la barbardhigo
5ta barnaamij ee ugu fiican abuurista fiidiyaha
M.2 SSD adapter - 5 -ka xero ee ugu fiican USB -ga
Ku biir kanaalkayaga Youtube
Privacy - qorid - Kontakt -
Ku noqo badhanka sare
Waxaan u isticmaalnaa cookies-ka boggayaga internetka. Qaarkood iyaga ayaa muhiim ah, halka qaarna ay naga caawiyaan sidii aan u horumarin lahayn degelkan iyo khibraddaada.
lagama maarmaanka ah
Aqbal qof walba
Kaliya aqbal buskudyada muhiimka ah
Dejinta asturnaanta shaqsiyeed
cookie Details Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah qorid
Halkan waxaad ka heli doontaa dulmar guud ee dhammaan cookies-ka la isticmaalo. Waad siin kartaa ogolaanshahaaga dhammaan qeybaha ama waxaad kaheli kartaa macluumaad dheeri ah waxaadna dooran kartaa keliya cookies.
Aqbal qof walba badbaadiyo
back Kaliya aqbal buskudyada muhiimka ah
Kukiyadaha lama-huraanka ahi waxay suurtogeliyaan hawlaha aasaasiga ah waxayna muhiim u yihiin ka shaqeynta habboon ee websaydhka.
Muuji macluumaadka cookie Qari macluumaadka cookie
Waxay keydisaa jaangooyooyinka booqdayaasha lagu xushay sanduuqa cookie-ka ee Borlabs.
Kukiyadaha tirakoobka ayaa si qarsoodi ah u aruurinaya macluumaadka. Macluumaadkaani wuxuu naga caawiyaa fahamka sida booqdeyaashayadu u isticmaalaan degelkeena.
Kukiyada Google ee falanqaynta bogga. Waxay soo saartaa xogta tirakoobka ee ku saabsan sida booqdehu u adeegsado websaydhka.
Warbaahinta Dibadda (7)
Mawduucyada ka imanaya barnaamijyada fiidiyowga iyo aaladaha warbaahinta bulshada ayaa hor istaagay. Haddii cookies-yada ka imanaya warbaahinta dibedda la aqbalo, marin u helidda maaddadani uma baahna oggolaansho gacan ka hadal ah.
Waxaa loo adeegsaday in laga furo waxyaabaha ku jira Facebook.
Waxaa loo adeegsaday in laga furo khariidadaha Google.
Waxaa loo adeegsaday in laga furo waxyaabaha ku jira barta Instagram.
Waxaa loo adeegsaday furitaanka waxyaabaha kujira OpenStreetMap.
Waxaa loo adeegsaday in laga furo waxyaabaha Twitterka ku jira.
Waxaa loo adeegsaday in lagu furo waxyaabaha Vimeo.
Waxaa loo adeegsaday in laga furo waxyaabaha ku jira YouTube-ka.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah qorid